မြန်မာ ဥပဒေများ (Myanmar Laws) - Myanmar Laws
You are here: http://laws.myanmars.net / English version
Computer Science Dev LawForeign Investment LawMyanmar Companies ActInsurance LawAsean Free Trade Agreement (AFTA)
2016 - Today (NLD)2011 - 2016 (USDP)1988 - 2011 (SLORC+SPDC)1962 - 1988 (MSPP)1948 - 1962 (AFPFL)1800 - 1948 (British + Japanese)
မြန်မာ ဥပဒေများ (Myanmar Laws)	2011 - 2016
ဥပဒေ တစ်ခုချင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြင်သင့်တာ၊ ဖြည့်စွက်သင့်တာတွေကို အကြံပေး တောင်းဆိုချင်တယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေကို ရှာဖတ်ကြည့်ပါ။ အဲဒီဥပဒေ ဖော်ပြထားတဲ့ စာမျက်နှာရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ facebook comment box မှာ ရေးသား အကြံပေး ဆွေးနွေး ရေးသားပေးပါ။ ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုလားမှုတွေကို law maker တွေ သိဘို့ စတုတ္ထ မဏ္ဍိုင်ကနေ သူတို့ သိအောင် ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဝိုင်းကြိုးစားရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်စား လွှတ်တော် တက်ခိုင်းထားတဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးမှာ ပြည်သူတွေ လိုအပ်ချက်တွေ တောင်းဆို အဖြေရှာပေးဘို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အလှည့်ကျ အစိုးရဖွဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူ့ အစိုးရ ဆိုတာတွေကလည်း ပြည်သူတွေရဲ့ လိုလားချက်တွေကို အဖြေရှာ ဖြည့်ဆည်းပေးဘို့ အမြဲတာဝန်ရှိပါတယ်။ / အယ်ဒီတာ Here is the collection of the laws enacted in Myanmar from 1-Apr-2011 till today, by the democratic government.
၁-၄-၂၀၁၁ နောက်ပိုင်း ယခုလက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရလက်ထက် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေများကို စုစည်း တင်ပြထားပါသည်။
Title	Hits	2016-01-29 - နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ
774	2015-12-22- ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
573	2015-12-22 - အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
435	2015-12-22 - မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
438	2015-12-22 - မြန်မာနိုင်ငံ ယစ်မျိုးအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
536	2015-12-22 - နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
559	2015-12-22 - တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
449	2015-12-15 - ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ
394	2015-12-15 - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
275	2015-12-15 - နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
390	2015-11-27 - အမြန်လမ်းမကြီးများဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
367	2015-11-27 - လမ်းမကြီးများ ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
329	2015-11-27 - လမ်းနှင့် တံတားအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
309	2015-11-25 - သွေးနှင့် သွေးပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
337	2015-11-25 - ပင်စင်အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ
354	2015-11-25 - ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
368	2015-09-07 - ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
600	2015-09-07 - မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေ
996	2015-08-31 - တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
1440	2015-08-28 - ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
716	2015-08-26 - ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ
496	2015-08-26 - မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
926	2015-08-26 - မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း ဥပဒေ
519	2015-08-26 - နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
522	2015-08-26 - ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
712	2015-07-28 - ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
510	2015-07-28 - ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
538	2015-07-22 - ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ
655	2015-07-22 - ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
638	2015-07-22 - နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
536	2015-07-15 - ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးရေးဆွဲတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
613	2015-07-14 - မြန်မာနိုင်ငံ တမံကြီးများဆိုင်ရာ အမျိုးသား ကော်မတီဥပဒေ
613	2015-07-14 - ဘွိုင်လာဥပဒေ
629	2015-07-14 - ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
562	2015-06-26- ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
531	2015-06-25- အောက်မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများ အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
660	2015-06-25- အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
618	2015-06-25- ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂ဝဝ၈ ခုနှစ်) ကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
672	2015-06-17 - တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
564	2015-04-09 - ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ဥပဒေ
917	2015-04-09 - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ
987	2015-04-09 - အမြန်လမ်းမကြီးများဥပဒေ
801	2015-04-02 - ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
952	2015-03-25 -မြေနှင့် အခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
1069	2015-03-23 -မြေသြဇာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
912	2015-03-17 - ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်များ (ဆင်ယင်ပြသမှုကန့်သတ်ရေး) အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
834	2015-03-17 - မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ
762	2015-03-17 - ကုန်းလမ်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
799	2015-03-05 - မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ဥပဒေ
849	2015-02-24 - ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ
1000	မိတ်ဆွေ ပြည်ထောင်စု သားရောင်းရင်းများ ခင်ဗျား... ဒီစာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဒီဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာပြောချင် ပါသလဲ? သင် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ? ထောက်ခံသလား? ကန့်ကွက်သလား? ဘယ်အပိုင်းက ခေတ်နဲ့ မညီဘူး ဖြစ်နေသလဲ? ဘယ်အပိုင်းကို ဦးစားပေး ပြင်သင့်တယ် ထင်သလဲ?
page views so far.	We have4guests and no members online